Ny mombamomba ny WKG - Church of God Switzerland of the World
Ny Fiangonan'Andriamanitra Maneran-tany raha atao hoe WKG, amin'ny teny anglisy dia "Fiangonan'Andriamanitra Maneran-tany" (hatramin'ny 3. Aprily 2009 fantatra any amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao amin'ny anarana hoe "Grace Communion International"), dia naorina tamin'ny 1934 tany Etazonia ho "Radio Fiangonan'Andriamanitra" nataon'i Herbert W. Armstrong (1892-1986). Amin'ny maha-mpanao dokam-barotra taloha sy mpitory ny Fiangonan'Andriamanitra amin'ny andro fahafito, Armstrong dia mpisava lalana tamin'ny fitoriana ny filazantsara tamin'ny alalan'ny radio ary nanomboka tamin'ny 1968 tao amin'ny fahitalavitra "The World Tomorrow". Gazety "The Plain Truth", izay natsangan'i Armstrong tamin'ny 1934 ihany koa, dia navoaka tamin'ny teny alemà nanomboka tamin'ny 1961. Voalohany amin'ny maha "The Pure Truth" ary avy amin'ny 1973 ho "Clear & True". Tamin’ny 1968 dia niorina tao Zurich ny kongregasiona voalohany tany Soisa miteny alemà, ary tao Basel, fotoana fohy tatỳ aoriana. Tamin’ny Janoary 1986, i Armstrong dia nanendry an’i Joseph W. Tkach ho mpitandrina jeneraly mpanampy. Taorian'ny nahafatesan'i Armstrong (1986), dia nanomboka niova tsikelikely i Tkach Senior, mandra-pahatongan'ny toriteny Krismasy malaza tamin'ny 1994, izay nanambaran'i Tkach fa manomboka izao dia tsy eo ambanin'ny taloha intsony ny fiangonana fa eo ambanin'ny fanekena vaovao. Ny fiovana lehibe naterak'izany, izay nanomboka tamin'ny taona 1998 dia nitarika ho amin'ny fanavaozana ny fiangonana manontolo sy ny fanavaozana manakiana ny boky fianarana rehetra teo aloha, dia nanova ny fiarahamonina fondamentalista teo aloha tamin'ny andro farany ho fiangonana protestanta "ara-dalàna".
Manova ny fiainan’ny olona i Jesoa Kristy. Afaka manova fikambanana koa izy. Ity no tantaran'ny nanovan'Andriamanitra ny Fiangonan'Andriamanitra Maneran-tany (WKG) avy amin'ny fiangonana miorina mafy amin'ny Testamenta Taloha ho fiangonana evanjelika. Zanak'i Tkach sen. Dr. Joseph W. Tkach, Jr. Mpitandrina jeneralin'ny Fiangonana misy mpikambana 42.000 eo ho eo any amin'ny firenena 90 eo ho eo eran'izao tontolo izao. Tany Soisa, ny Fiangonan’Andriamanitra Maneran-tany dia anisan’ny Fikambanan’ny Evanjelika Swiss (SEA) nanomboka tamin’ny 2003.
Ny tantara dia samy ahitana fanaintainana sy hafaliana. Mpikambana an'arivony no nandao ny fiangonana. Saingy feno an'arivony feno hafaliana sy zotom-po vaovao ho an'i Jesosy Kristy, ilay Mpamonjy sy Mpanavotra azy. Ankehitriny dia mirotsaka sy mandroso ny foto-kevitry ny fanekem-pihavanana Vaovao, dia i Jesoa: ny fiainana, ny fahafatesana ary ny fitsanganan'i Jesosy Kristy. Ny asa fanavotan'i Jesosy ho an'ny olombelona no ivon'ny fiainantsika.
Ny fahazoantsika an'Andriamanitra vaovao dia azo fintina toy izao manaraka izao:
Ny Triune Andriamanitra dia namorona ny olona rehetra. Amin'ny alàlan'ny maha-Andriamanitra sy maha-olombelona an'i Jesoa Kristy, ny olona rehetra dia afaka mankafy ny fitiavan'ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
Jesosy, zanak'Andriamanitra dia tonga olombelona. Tonga tety an-tany izy mba hampihavana ny olombelona rehetra amin'Andriamanitra amin'ny fahaterahany, fiainana, fahafatesana, fitsanganana amin'ny maty ary fiakarana.
Jesosy voahombo tamin'ny hazo fijaliana, nitsangana sy nanomezam-boninahitra an'i Jesosy no solontenan'olombelona amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mitaona ny olona rehetra aminy amin'ny alàlan'ny herin'ny Fanahy Masina.
Ao amin'i Kristy, dia tia sy eken'ny Ray ny zanak'olombelona.
Jesosy Kristy, miaraka amin'ny sorona nataony teo amin'ny hazo fijaliana, dia nandoa indray mandeha ho antsika rehetra noho ny fahotantsika. Nandoa ny trosa rehetra. Ao amin'i Kristy Ray dia mamela ny fahotantsika rehetra ary maniry mafy antsika hiverina Aminy ary handray ny fahasoavany.
Tsy afaka mitia ny fitiavany fotsiny isika raha mino fa tia antsika izy. Azontsika atao ihany ny mankafy ny famelan-keloka raha mino isika fa navelany ny helony.
Tarihin'ny Fanahy Masina, mitodika any amin'Andriamanitra isika. Mino ny vaovao mahafaly isika, mandray ny hazofijaliantsika ary hanaraka an'i Jesosy. Ny Fanahy Masina no mitarika antsika ho amin'ny fiainana mandrindra ny Fanjakan'Andriamanitra.
Aminny alalanny fanavaozana ny finoantsika ity dia mino isika fa afaka manao serivisy fitiavana be fitiavana hitarika ny olona mankany amin'i Jesosy sy hiaraka amin izany lalana izany.
Na mitady valiny amin'ireo fanontanianao momba an'i Jesoa Kristy sy ny fomba hanovana fahasamihafana eo amin'ny fiainanao ianao, na raha mitady vondrom-piangonana kristiana hiantso ny tokantranonao ara-panahy ianao, dia faly tokoa izahay hitsena anao sy miaraka aminao Mba hivavaka aminao.